DAAWO: Telefishinka SVT oo ka qeyb-qaatay daan-daansiga lagu hayo Muslimiinta Sweden | Somaliska
Isbuucaan waxaa telefishinka qaranka Sweden SVT lagu soo bandhigay warbixin laga sameeyay waxa loogu yeero Xag-jiraynta Xaafadaha soo galootiga taasoo ay baaritaan ku sameeyeen in dhalinyarada Muslimiinta ah ee ku nool xaafadaha Rinkeby, Tensta iyo Husby oo ka tirsan Stockholm ay noqdeen kuwo diinta ku dhagan oo xagjir ah.
Waxay wareysi la yeesheen dhowr qof oo Soomaali ah kuwaasoo sheegay in dhalinyarada lagu xagjireeyo masaajida. Raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa aabe gabadhiisa ay u safartay wadanka Syria ka dib markii uu sheegay in lagu tashkiiliyay mid ka mid ah masaajida Stockholm.
Balse telefishinka ayaa arinta meel xun gaarsiiyay ka dib markii ay soo kaxeysteen haweeneyda lagu magacaabo Mona Walter oo ah Soomaali qaadatay diinta Kiristaanka isla markaana caado ka dhigatay aflagaadada diinta Islaamka iyo ceebaynta Soomaalida ku nool Sweden. Waxay si daan-daansi ah ula doonteen haweenaydaan in ay la hadasho dhalinyarada shaqo la’aanta ah ee ku nool Rinkeby iyadoo durbadiiba ay xaaladu xirka isku shareertay.
Sababta uu telefishinka qaranka Sweden u isticmaalayo haweenaydaan oo la wada ogyahay in ay tahay mid Islaamka iyo Muslimiinta neceb ayaa ah mid lala yaabo isla markaana hoos u dhigaysa sumcada SVT.
Inkastoo ay wax ka jiraan in dhalinyarada qaarkood lagu xagjireeyay xaafadahaas isla markaana qaar badan ay u safreen wadamada Syria iyo Iraq ayaa taasi ay tahay mid ay wada ogyihiin Muslimiinta ku nool xaafadahaas isla markaana ay yihiin kuwo ka walwalsan oo u taagan sidii ay dhalinyarada u fahansiin lahaayeen diinteena saxda ah.
Balse in telefishinka SVT uu buunbuuniyo calaamadaynta dhamaan Muslimiinta ku nool xaafadahaas in ay yihiin kuwo xagjiriin ah isla markaana ay soo kaxaystaan haweenay iyada lafteedu xagjir ah oo la wada ogyahay in ay doonayso in ay ku soo caan-baxdo aflagaadada Muslimiinta ayaa ah mid aan la aqbali karin.
Migrationsverket: “Labo sano waa in aad wada noolaydeen”
Dadku markay wax diidayaan waa in ay cadeeyaan somalida intooda xun ayaa ina metesha wadankasta inta wanaagsana way aamusaan hadaad aamustayna ogow raalibaadkatahay Somalida inta dhiban iyo inta aan metelaan inta kale waa in ay muranka daayaan oo isdifaacaan wixii laga sheegana kadaba tagan oo beeniyaan maaha enaguun in aan isuxoogwaynaanoo
waxaan aad uga xumahay anagoo somali ah inan cadeyn weyno waxa aan nahay
hadalkas waxan ka wadaa qoftan diinta ka baxday waxey sawir qaldan ka bixineysa somalida iyo diinteena.
su’aasha meesha taala waa sidee maxaa nalooga wayay dad badan oo bulshada dhexdeda ka dhex muuqda sawirka dhabta ah ee somalidana dadka u soo bandhiga
muhiimada ma aha inad xooga cayr ah qaadato kadibna aad faraxsanato
Jimco sxp Video-ga masoo baxayo mobile laguma daawan Karo.
Asc waa yaab somalida markay diinta islaamka ka baxaan maxay diinta islaamka u aflagaadeeyaan maxay u caayaan somaali ay iyaga ka dhasheen ma wadamada ay qaxootiga u tageen may u maleeyaan inay u dhasheen wax badan ayan soo arkay dad bdn oo sidaas ah soomaali meesha ay tagaan ayey ku fac yihiin layaab waye
marwalba ay somali rabto iin ay xaqeda hesho kaas oo kaleh ayey so adegsadaan sida ay niyada uga dilaan dadka xaaq radiska ah . way cadaysteen eh dhamaan fadlaan aan nadsano xaqaa inaga maqaan
Haa xaaq ayaan u lenahay iin aan ku helno 5 sano warqaha , haa xaaq ayaan u lenahay dhakhtaar , waaxbarasharo , iyo shaqo aan cunsuriyad ku jiriin
August 28, 2015 at 09:05
Niin walba oo rabaa iin u so caan baxo oo somali ah daadkisa iin u kaa dhex bilabo waa ayaan daro .
waxaan fahmi wayey marwalba oo ay yimadaan rinkeby maxay uga hadlaan xijabka? maxa daadka loo xuman wabaa iin kaa yaar 2% waxa xijabka wato dadka somalida , maxay uga hadli wayaan shaqo xumida haysanta dhalinta maxay uga hadli wayan dhalinta jamiciga eh guryaha dhex fadhida, maxay uga hadli wayaan cunsuriyada , maxay uga hadli wayaan guri laanta , waxas oo dhaan oo bulshada qimo u leh ? maxay arbetförmedlingen iyo försakringkassan ay uga gureen meshaan ? , maxay dowladu uga carartay meshaan , waa normalt iin ay dadku dhexdoda isku noqdaan oo ay kaa go aan wax walba oo uu qof kasto oo khayin ah uga fai daysta marka ay dowladu ka baxday boskedi. waa qalaan waxaa daadkena lagu hayo , somalay didaa sawirkan xuun eeh dusha laa ino saray plz
haa kuwo xijaban swedishkuba way qabaan anagana waan qabna kama tiro badno wana iin laa siyo xaaq isku mid ah .
August 28, 2015 at 23:30
Qofka kasta oo aduunka saaran waxaa la siiyay caqli uu ku ka kala garto qaladka iyo waxa saxa ah.waxaan filayaa qof qaldamo inuu saxayo sharciga wadanka u degsan ee lagu sugan yahay. Hadaba dadka loo tirinayo inay qalad samaynayaa waa in la gaarsiiyo dawlada ay dalkeeda ku dhex samaynayaan,islamarkana la gaarsiiyo dhibaatada ka dhalanayso xaaladas iyo cawaaqibka ay keenayso, loona baahan yahay in dedeg wax looga qabto si dadka amaan ugu wada noolaado qofna aan lagu xad gudbin, qof kastana laga dhaadhiciyo ixtiraamka kan kale leeyahay ee ku saabsan diintiisa iyo arimihiisa gaarka iyo tan guudna la kala garto.
Qofka kasta oo aduunka saaran waxaa la siiyay caqli uu ku ka kala garto qaladka iyo waxa saxa ah.waxaan filayaa qof qaldamo inuu saxayo sharciga wadanka u degsan ee lagu sugan yahay. Hadaba dadka loo tirinayo inay qalad samaynayaa waa in la gaarsiiyo dawlada ay dalkeeda ku dhex samaynayaan,islamarkana la gaarsiiyo dhibaatada ka dhalanayso xaaladas iyo cawaaqibka ay keenayso, loona baahan yahay in dedeg wax looga qabto si dadka amaan ugu wada noolaado qofna aan lagu xad gudbin, qof kastana laga dhaadhiciyo ixtiraamka kan kale leeyahay ee ku saabsan diintiisa iyo arimihiisa gaarka iyo tan guudna la kala garto. waxaa kale oo in maanka lagu hayo mudan gabdhaha soomalida sheegta ee diinta faraha ku taaga waxay beryahan ka soo baxeen yurub waana tiro yar oo aan shan ka badnayn. Bulshada yurub joogtana cadadkeeda waa la garan karaa ee waxaa haboon in si quman loogala macaamilo dawaladaha ay ku dhex nool yihiin ee raaliga uga ah inay dadka ku xad gubaan warkooda la tuso in kastoo aan aamin sanahay inay jiraan kuwo gadaal ka riixaya oo u soo dhiibay waxa ay buufinayaan.